अबदेखि स्वास्थ्य चौकीमै मृगौला परीक्षण « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अबदेखि स्वास्थ्य चौकीमै मृगौला परीक्षण
मृगौलामा खराबी छ छैन भन्ने कुरामा ढुक्क हुन अब सहरका सुविधासम्पन्न अस्पताल धाइरहनु नपर्ने भएको छ । मृगौला परीक्षण गराउने व्यवस्था अबदेखि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामै हुने भएको छ । मृगौला परीक्षणका लागि प्रयोग हुने ‘डिपिस्टीक किट’ मनाङ्गबाहेकका सबै जिल्लामा पठाइसकिएकाले स्थानीयतहमै परीक्षण सम्भव हुने भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले देशभरी पहिलो चरणमा २० लाखजनाको मृगौला परीक्षण गर्न पुग्नेगरी किट पठाइएको जनाएको छ । महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह टिंकरीले मनाङ्गमा बाटोको समस्याका कारण केही दिनपछि किट पुग्ने बताए । अरु सबै जिल्लामा किट पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए ।
चार महिना अघि नै किट पठाउने भनिएपनि कार्यान्वयन नभइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको निर्देशनपछि सबै जिल्लामा मृगौला परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था हुन लागेको हो । मन्त्री थापाको निर्देशन अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, उपक्षेत्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल लगायत गरी १ सय ३३ स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने गरी किट वितरण गरिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा पुगेको किटलाई केही दिनमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार मातहतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा पठाइने भएको छ ।
यसरी पत्ता लाग्छ मृगौलाको समस्या
वरिष्ठ मृगौलारोग विशेषज्ञ डा. बिष्णु पहारीका अनुसार उक्त ‘डिपिस्टिक किट’ को जाँचबाट सुरुको अवस्थामा पिसावमा प्रोटिनको मात्रा लिक भएको छ कि छैन भन्ने पत्ता लगाइन्छ ।
२० मिलिलिटर जति पिसावले किट भिजाएपछि देखिने किटको रङ्गका आधारमा मृगौलाको अवस्था थाहा हुने मृगौलारोग बिशेषज्ञ डा. पहाडीले बताए । उनका अनुसार मृगौला ९० प्रतिशतसम्म खराब भइसक्दा पनि कुनै लक्षण देखिँदैन । ‘९० प्रतिशत मृगौला खराब भए पहिलेकै अवस्थामा आउन गाह्रो हुने भएकाले रोग लाग्नु अगावै मृगौलाको अवस्था पत्ता लगाउन उक्त किटले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ’, उनले भने ।
उक्त जाँचपछि चिकित्सकद्धारा परीक्षणमा कुनै समस्या नभएको देखिएमा एक वर्षपछि फेरि परीक्षण गर्न आउन सूचित गरिने छ । त्यो बेला समस्या देखिएमा थप उपचारका लागि स्थानीय चिकित्सकले सुझाव दिनेछन् । सरकारले ल्याएको नयाँ सेवालाई उपयोग गरी आफ्नो मृगौलाबारे थाहा पाइराख्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको कारोबारमा खबर छ । मन्त्रालयले यसै वर्ष विद्यालयहरुमा स्वास्थ्यकर्मीसहित किटहरु पठाएर विद्यार्थीहरुको मृगौला परीक्षण गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।